Tambajotra fitaovana fanaovana kajy - www.test-net.org
Tambajotra fanaovana kajy na IP Saron-drezo fanaovana Kajy dia tolotra tambajotra zatra ny Kajy subnet isan-karazany amin'ny alalan'ny tambajotra saron-tava. Izany fanompoana izany kajy subnet tambajotra adiresy IP amin'ny fampiasana ny tambajotra kilasy, Ny adiresy IP, saron-drezo, subnet potika, saron-tava potika, ambony indrindra takiana IP subnets sy ambony indrindra takiana tompon'ny maro isan-subnet. Vokatry ny subnet kajy manome ny hexadecimal adiresy IP, ny wildcard saron-tava, ho ampiasaina amin'ny ACL (Ny Fidirana Amin'ny Fanaraha-Maso Ny Lisitry), subnet ID, ny fampitana ny adiresy, ny subnet adiresy isan-karazany noho ny vokatry ny subnet tambajotra sy ny subnet bitmap.
Miditra ny netmask(s) ao CIDR tarehimarika (/25) na miravaka decimals (255.255.255.0). Mifanohitra amin'izany netmasks dia voan'ny. raha ianao malahelo ny netmask ipcalc mampiasa ny ny default netmask ny am-pianarana ny fiaraha-monina.
Mba jereo kely ny toerana eo ny potika ny adiresy: Ny potika aloha noho ny izany dia ny tambajotra anisan'ny ny hiatrika, ny potika taorian'ny izany dia ny miaramila singa. afaka jereo roa tsotra antontan'isa: Ao amin'ny fiaraha-monina adiresy rehetra miaramila potika ireo 0, ao namoaka ny hiatrika izy ireo&#8217;re vonona.
Ny fahamboniany ny fiaraha-monina dia nanapa-kevitra amin'ny alalan'ny ny voalohany dia potika.
Raha ny fiaraha-monina dia tsy miankina internet mifanaraka amin'ny RFC 1918 izany no nanamarika hoe. raha maneho subnets ny vaovao potika ao anatiny ny tambajotra ampahany ny netmask dia voamarika ao amin'ny miavaka loko
[Tontalin'ny: 1 Salasalany: 5/5]
Hiaraka 53,542 mpanjifa hafa